China Air Rivotra vita amin'ny fivonosana vita amin'ny seza any Etazonia Hongzhu
Manasa sy manasa Tsy azo esorina sy hosasana
endri-javatra 100% anti-rano, anti-decubitus
Ampiasao Seza, seza seza, seza seza, seza fitsaboana, seza seza misy kodiarana
Size 41x43cm, Free habeny
Color Manga na namboarina
Material Vvett Fabric, PVC
endri-javatra Hafatra, anti-decubitus, hafatra
Size 37 * 14cm, 41 * 12cm
Color Rose, volo fotsy na namboarina
1. manatsara be ny fipetrahana milamina amin'ny lafiny rehetra: ity tsihy ity dia azo ampiasaina mandritra ny mitondra fiara, eny amin'ny fiaramanidina na fiaran-dalamby, mipetraka amin'ny seza misy kodiarana, na eo amin'ny latabatra sy ny fandriana, eo amin'ny latabatry ny solosainao ao an-trano na birao.
2. Fampiononana mora ny fisondrotana: rafitra tsotra mihidy tsy manam-paharoa dia ahafahanao manamboatra mora foana ny habakabaka, miorina amin'ny karazana vatana manokana anao. Mampiditra pump pump maimaimpoana maimaim-poana.
3. manampy amin'ny fisorohana ny fery amin'ny tsindry, bedore ary ny fanaintainana ao aoriana: famolavolana ergonomika fizarana lanja izay manome lanja fanaintainana mampitony anao.
4. fitiliana kalitao, fitaovana maharitra EVERRELIEF: mampionona sy porofo manaporofo tanteraka ny seza lehibe, ahafahanao miantoka ny fahafaham-ponao. Ny famolavolana tsy manam-paharoa dia manome fikainganana sy fanarenana vinyl manan-danja ho an'ny fanadiovana mora.
5. mora entina, ny famoronana maivana dia ahafahanao mitondra mora foana amin'ny seza seza na mihidy haingana, ampiasaina.
Previous: Vidiny farany ambany indrindra miverina amin'ny fanaintainana fanaovan-tsitraka fanaintainana - Mpitam-pahefana J01 - Hongzhu
Manaraka: Fahatokisana miverina amin'ny fehikibo
Cushion amin'ny fitsaboana ara-pitsaboana
Cushion amin'ny fantsom-pahasalamana amin'ny rivotra
Cushions seza any ivelany